Vaovao - Fampandrenesana ny fahatongavan'ireo vokatra nafarana: Triclosan
Hatramin'ny nananganana ny Suzhou Springchem, dia nanao ny fanafarana sy ny fanondranana asa manokana ataon'ireo ozinin-trano izahay. Miaraka amin'ny areti-mandringana ny satroboninahitra vaovao tao anatin'ny roa taona lasa, mifanaraka amin'ny fiaraha-miasa feno amin'ny asa fisorohana ny valanaretina manerana ny firenena, ary ny iraky ny fampandrosoana ny orinasa manokana amin'ity vanim-potoana manokana ity, manaraka tsara ny fepetra takian'ny firenena izahay amin'ny famonoana otrikaretina feno 100%. ary famonoana otrikaretina ny entana rehetra ampidirina sy aondrana. Na dia manafatra akora simika ho an'ny famonoana otrikaina sy vokatra biocide aza izahay, ho an'ireo hetsika famonoana otrika fonosana ivelany, paleta ary fitoeram-bokatra iray manontolo, tsy misy velarana mihitsy. Ho an'ireo akora simika nafarana dia nahavita ny fahazoan-dàlana sy famoahana ny entana ao amin'ny seranan-tsambon'i Shanghai izahay, ary avy eo nandamina orinasa famonoana otrikaretina matihanina ho tonga hiasa, ary nony farany dia nafindra tany amin'ny trano fanatobiana entana manokana an'ny orinasa Ningbo ho fitehirizana, izay afaka ampiasaina amin'ny fahatokisana.
Ny akora nafarantsika tamin'ity indray mitoraka ity dia ny fotoana dia ny Triclosan (TCS). Izy io dia spektrum lehibe, mahomby, fiarovana ary tsy bakteria poizina. antibakteria ekena amin'ny ankapobeny misy vokany tsara. Io no iray amin'ireo akora malaza indrindra eto amin'ny tsena manerantany.
Triclosan dia nampiasaina ho fikosehana hopitaly tamin'ny taona 1970. Nanomboka teo dia nitatra ara-barotra izy io ary ankehitriny dia fangaro mahazatra amin'ny savony (0,10-1,00%), shampoos, deodorants, nify, fanasana vava, kojakoja fanadiovana ary fanafody famonoana bibikely. Anisan'ny vokarin'ny mpanjifa izany, ao anatin'izany ny kojakojan-dakozia, kilalao, lambam-pandriana, ba kiraro ary kitapo fako.
Ny triclosan dia azo ampiasaina ho anti-bakteria sy antiseptika amin'ny sehatry ny vokatra fikolokoloana tena manokana na kosmetika, vokatra famonoana otrikaretina buccal.